Sawirro: DF oo Muqdisho ku shirisay beelo kasoo horjeeda Axmed Madoobe - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: DF oo Muqdisho ku shirisay beelo kasoo horjeeda Axmed Madoobe
Sawirro: DF oo Muqdisho ku shirisay beelo kasoo horjeeda Axmed Madoobe
Muqdisho (Caasimada Online) – Qoraal lagu baahiyey bogga wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa looga warbixiyey kulan wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax uu Muqdisho kula yeeshay odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Jubaland, kuwaas oo cabasho ka ah maamulkooda, sida lagu sharaxay qoraalkan.
“Odayaal dhaqameedka beelaha dagga Julabaland iyo siyaasiinta ka soo jeeda maamlkaas ayaa u gudbiyay Wasiirka Wasaaradda cabashooyin ku aaddan sida ay ku dhisantahay Dowlad Goboleedka Jubaland,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalkaan in odayaasha iyo siyaasiyiinta la kulmay ay cadeeyeen in aysan ku qanacsaneyn maamulka hadda ka jira Jubbaland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Madoobe, iyagoo dalbaday in Jubbaland laga dhiso maamul la wada leeyahay.
“Waxaa ay caddeeyeeyn in aysan ku qanacsaneyn guud ahaan Maamulka Jubaland. Isla markaana ay daneynayaan maamul lagu dhiso si wada ogal ah, damaanad qaadi kara Nabadgalyadooda iyo isku haynta wada jirkooda iyo horumarkooda, shacabka ku dhaqan maamulka Jubaland,” ayaa lagu yiri qoraalka ay baahisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Jeneraal Mukhtaar ayaa sida lagu sheegay qoraalkan odayaasha beelaha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Jubaland ka dhageystay cabashooyinka ay soo gudbiyeen ee la xariira caqabadaha ay ka wajahayaan maamulka Axmed Madoobe.
Maamulka hadda ka arrimiya Jubbaland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo dowladda dhexe ayaan laheyn macaamil wanaagsan, waxaana ka dhex jira khilaaf salka ku haya doorashadii u dambeysay ee markiisii 3-aad uu ku soo baxay Axmed Madoobe.
Dowladan uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo oo si adag uga hor timid dib u doorashadii Axmed Madoobe ayaa mar dambe u ogolaatay in si ku meel gaarnimo ah uu Axmed ku sii xukumo Jubbaland, illaa bisha Agosto ee sanadkan, oo haatan ay ka hartay afar bilood.